कोरोनाले आक्रान्त बनेका बेला पोखरामा भासियो जमिन, हेर्नुहोस भिडियो – Dainik Sangalo
August 25, 2020 751
पोखरा-पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २ मा जमिन भासिएको छ । गएराती अबिरल बर्षाका कारण जमिन भासिएको स्थानीयबासी बताउँछन् । वरिपरी नालीको मर्मतकार्य भईरहदा नालीबाट पानी नगई बाहिरी भागबाट पानी बग्दा जमिन भासिएको हो । भासिएको ठाउँले २ तले पक्की घरलाई समेत असर गरेको छ भने भासिएको भाग करिब ४÷५ मीटर गहिरो देखिन्छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी समेत स्थलगत निरिक्षणमा पुगको थिए । उनले स्थानीयहरुलाई नआत्तिन र यो प्राकृत्तिक बिपत्ती हो, यसले पोखरा महानगरपालिको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने यस्ता प्रकारका समस्याहरु एक ठाउँको मात्र होईन पोखरा महानगरकै साझा समस्या हो । यसको निराकारण गर्न भन्दा पनि आफै शुरक्षित हुन जरुरी रहेको उनले बताए । भौगोलिक बनावटका कारण यस्तो भएको भन्दै अब महाननगरले संरचना बन्नु अगाडी नै त्यसको बस्तुगत बिबरण तयार गरी अनुमती दिने बताए ।
Prevवृद्धआश्रमा आमासँगै बस्छन् ३५ बर्षका छोरा ! (भिडियाे)
Nextधरानमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएका दुई पुरुषको २४ घण्टा नबित्दै मृत्यु